Maraykanka iyo Qatar oo soo dhaweeyay M/weynaha cusub
War kasoo baxay aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumadda Washington ay soo dhaweynayso doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu doortay M/weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Prof Xasan Shiikh Maxud Gurguurte.
War saxaafadeedkaan oo lagu qoray warbaahinta Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in sida ay doorashadu u dhacday ay aheyd mid u dhacday si cadaalad ku dhisan isla markaana muujinaysa in Soomaaliya ay horeu u qaaday tilaabo geesinimo leh.
Afhayeenka aqalka cad ee dalka Maraykanka Jay Carney oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay inay la shaqeyn doonaan dawlada M/weynaha cusub ee Soomaaliya ee uu baarlamaanku doortay.
Xukuumadda Washington waxay cadeyneysaa inay ku faraxsantahay inuu guuleysto Prof Xasan Shiikh Maxud waana la shaqeyn doonaa waana hambalyaynaynaa ayuu yiri afhayeenka aqalka c ad ee Maraykanka.
Dhinaca kale dawlada Qatar ayaa iyana dhankeeda ku dhawaaqday inay soo dhaweynayso sida doorashadu u dhacday .
War kasoo baxay xafiiska Amiirka Qatar ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya uu u dhashay waa cusub oo is badal keeni doona sida uu yiro.
Sidoo kale qaar ka mid ah wadamada Africa iyo kuwa ku jira ururka Jaamacadda Carabta ayaa iyana soo dhaweeyay doorashada madaxtinimada Muqdisho oo uu ku guulaystay M/weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Prof Xasan Sh, Maxud oo ah shaqsi aqoonyahan ah.
Xildhibaanadda baarlamaanka ayaa xalay Xasan Sh, Maxud ku doortay dugsiga tababarka Jen Kaahiye ee magaaladda Muqdisho.